Milicsiga Dalab Uu Maraykanku Hor Dhigay Rayaale Oo Ku Saabsanaa Wada Hadal Uu La Furo Somaliya Iyo Mid Uu Daahir Hordhigay Oo Ku Saabsanaa Aqoonsiga Somaliland | Berberatoday.com
Milicsiga Dalab Uu Maraykanku Hor Dhigay Rayaale Oo Ku Saabsanaa Wada Hadal Uu La Furo Somaliya Iyo Mid Uu Daahir Hordhigay Oo Ku Saabsanaa Aqoonsiga Somaliland
Hargeysa(Berberatoday.com)-Madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Rayaale Kaahin, ayaa marka laga hadlayo wada hadal uu la bilaabo Somaliya iyo heshiisyo ay wada galaan, wuxuu taagnaa mawqif cad oo adag. Madaxweynihii hore Daahir Rayaale Kaahin, wuxuu taagnaa mawqif aad u adag, marka laga hadlayo wada hadal uu la bilaabo dawlad ay Somaliya leedahay, waxaanu ku xidhay shuruud adag oo ah inay Somaliya aqoonsato qaranimada Somaliland.
Maraykanka ayaa Daahir Rayaale intii uu talada hayay hordhigay inuu wada hadal la furo dawladii Somaliya ee uu madaxweynaha ka ahaa Marxuum Cabdillaahi Yuusuf Axmed. Daahir Rayaale ayaa isna dhinaciisa Maraykanka hordhigay dalab ah inuu Maraykan dawladda Ingiriiska kala shaqeeyo sidii Somaliland loo aqoonsan lahaa.
Tusaale ahaan Madaxweynihii hore wuxuu taagnaa inaan wada hadal iyo heshiis suurtogal ahayn inta ay dawladaha Somaliya sheegayaan dalka Somaliland oo qaranimadiisa la soo noqday sannadkii 1991. Sida ku cad warbixinaha uu baahiyay sir fashiliyaha Wikileaks, dawladda Maraykanka ayaa kulan ay sanadkii 2007 kula yeelatay Daahir Rayaale Kaahin, magaalada Addis Ababa ugu soo bandhigay wada hadal iyo heshiis dhex mara dawladda Somaliya oo uu wakhtigaas Madaxweyne ka ahaa Cabdillaahi Yuusuf Axmed.
Ambassador Donald Yamamoto, oo wakhtigaas ahaa safiirka Maraykanka u joogay Itoobiya, ayaa Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin iyo xubno wasiiradiisa ka mid ahaa oo la socday su’aalay sida uu u arko xidhiidh dhex mara Somaliland iyo dawladii Cabdilaahi Yuusuf. Daahir Rayaale Kaahin ayaa sida warbixintaas ku cad ku jawaabay, “Wax heshiis ahi suurtogal maaha inta uu Cabdillaahi Yuusuf sii wado sheegashada Somaliland. Waxaanu intaas raaciyay, “50,000 (Konton kun oo ruux), ayaa u dhintay dagaalkii gobanimada Somaliland lagula soo noqday. Marka ay sidaas tahayna xalka keliya ee jiraa waxa weeye inay Somaliya ogolaato inaanu noqono laba qaran oo siman oo ah Somaliland iyo Somaliya.
Daahir Rayaale wuxuu weeraray dawladda Somaliya ee uu wakhtigaas Cabdillaahi Yuusuf madaxweynaha ka ahaa, “Dawladda ku meelgaadhka ah ee Somaliya waxay ceeb ku tahay dadka Somaliyeed.”, isagoo uga jeeday inaanay wax la taaban karo tarin dadka ay wakiilka ka tahay.
Daahir Rayaale Kaahin, wuxuu isna dawladda Maraykanka dhinaciisa hor dhigay dalab ah inay Ingiriiska kala shaqayso aqoonsiga Somaliland, wuxuuna safiirkaas Maraykanka ah u sheegay inuu Ingiriiska ku qanciyay inay dawladaha Afrikaanka culays ku saaraan aqoonsiga Somaliland, waxaanu Maraykanka ka codsaday inay xoojiyaan ololaha Ingiriiska. ?Waxaan la kulmay xoghayaha Ingiriiska u qaabilsan arrimaha barwaaqo sooranka Lord Triesman, waxaanan isla qaadanay inuu dawladaha Afrikaanka ku cadaadiyo inay aqoonsadaan Somaliland, Maraykanka waxaan ka codsanaynaa inuu sidaas yeelo.” Ayuu yidhi Rayaale, oo intaas raaciyay inuu wasiirkiisa arrimaha dibaddu wakhtigaas ku maqnaa safar uu ku tagay dalalka galbeedka Afrika si uu taageero ugaga raadiyo qaddiyadda Somaliland.
Wasiirkiisii maaliyadda Cawil Cali Ducaale oo kulankaas ku wehelinayay Daahir Rayaale Kaahin ayaa isna goobtaas ka cadeeyay sida ay u adagtahay inay Somaliland wada hadal la bilowdo dawladii Cabdillaahi Yuusuf.